Apple inobvisa chiteshi chekuongorora kubva kuApple Watch Series 7 | IPhone nhau
Kutanga mangwana, Gumiguru 15, ekutanga mauniti eApple Watch Series 7 achatanga kusvika kune vekutanga vane rombo rakanaka. mabvazuva wachi itsva Apple yakashambadzirwa mavhiki gare gare kune iyo iPhone 13 nekuda kwematambudziko ekugadzira, kunyangwe pasina chibvumirano chepamutemo kubva kuBig Apple. Zvisinei, vamwe vashandisi vakatoiwana uye vakasimbisa izvozvo iyo slot neiyo yakavanzwa yekuongorora chiteshi yaive pane mamwe mamodheru senge Apple Watch Series 3 haisisipo muApple smartwatch nyowani. Inogona kunge yakatsiviwa nechimwe chinhu chitsva chakawanikwa mukati chingabvumidze kuwedzerwa kwedatha kweanopfuura mazana mana mbps.
Mhoro kune yakavanzika yekuongorora chiteshi pane iyo Apple Watch Series 7
MuApple Watch hapana chiteshi kana slot yakatarisana nemushandisi. Tinogona chete kuchaja kuburikidza nemagineti yekuchaja base inouya mubhokisi kana mamwe mapato echitatu. Zvisinei, makore apfuura zvakatangwa chiteshi chakavanzika chekuongorora izvo zvakatendera Apple kuchengetedza smartwatches. Yakanga iri pasi petabvu diki pane rimwe remativi uko kwatinoisa chikamu chetambo.
Zviri pamutemo! Apple Watch Series 7 Pre-Order Inotanga Gumiguru 8
Yekutanga Apple Watch Series 7 iyo iri kurova yekudhinda leave kuona zvishoma , que Apple yakabvisa chiteshi chekuongorora muchizvarwa chayo chitsva chewadhi dzakangwara. Izvi zvaigona kunge zvakazviwanira iyo IP6X isina guruva-isingabatike izvo zvimwe zvizvarwa zvaishaya.
Zvisinei, chiteshi chengarava hachina kubairwa pasina. Zvinozivikanwa kuti mukati meawa pane module nyowani inokwanisa kubatanidza pane kuwanda kweiyo 60,5 GHz zvisina waya. Izvi zvinobvumidza Apple Tsvaga iyo kifaa kudzoreredza watchOS kana kuita yekuchengetedza scan. Izvi zvinoda chigadziko chekuchaja chinoshanda panguva imwechete iyo iyo FCC yakaratidza kuti iripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inobvisa chiteshi chekuongorora kubva kuApple Watch Series 7
Iyi inotevera AirPods Pro inogona kuwedzera sensors yekushisa, kumisikidza kwakaringana uye kunyange kuve headset
Makuhwa akati wandei anoratidza kuti Apple ichaunza iyo AirPods 3 kuKeynote neMuvhuro